Kolikoly sy herisetra ara-nofo :: Tandindonin-draharaha hafahafa i Ahmad, filohan’ny CAF • AoRaha
Kolikoly sy herisetra ara-nofo Tandindonin-draharaha hafahafa i Ahmad, filohan’ny CAF
Niafara tamin’ny fanesorana tamin’ ny toeran’ny sekretera jeneralin’ny Kaonfederasiona afrikanina taranja baolina kitra (CAF) i Amr Fahmy, teratany Ejyptiana, ny alatsinainy lasa teo, ny raharaha mafana ao amin’ ity rafitra mifehy ny baolina kitra aty Afrika ity. Ny “fiampangana an’i Ahmad, filohan’ny CAF, tany amin’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) momba ny fano­mezana vola 20 000 dôlara isaky ny Federasiona miendrika kolikoly sy filazana fa fanararaotana ara-nofo” no anton’ity fanesorana azy tamin’ny toerany ity. “Fanapahan-kevitra noraisin’ny CAF tamin’ny 11 avrily lasa teo no nanesorana an’i Amr Fahmy”, hoy i Nathalie Rabe, tompon’andraikitry ny sera­sera eo amin’ny Kaofederasiona afrikanina. Milaza ny tsy mahafantatra an’ireo fiampangana ireo ity tompon’ andraikitra ity.
Tamin’ny volana marsa lasa teo no nandefa taratasy tany amin’ny Fifa ity teratany ejyptiana, 36 taona ity. Mitanisa an’ireo “fizaram-bola nataon’i Ahmad ho an’ireo filohan’ny Federasiona” sy “fampiasana ny volan’ny CAF amin’ny filàny manokana ary fanararaotana ara-nofo amin’ ireo mpiasa eo anivon’ny CAF sasany”, ny taratasy nalefany tany amin’ny FIFA.
Nosoloina an’i Mouad Hajji, diplaomaty maraoka­nina fahiny, ity sekretera jene­raly ity. Samy tsy naneho ny heviny avokoa ireo rehetra akaiky an’ity filohan’ny CAF ity, rehefa nanontaniana.
“Fiampangana ireny. Anjaran’ ny tompon’andraikitra ny manao ny fikarohana sy ny fanadihadihana”, araka ny nambaran’ny mpiara-miasa aminy akaiky iray teto Madagasikara, fony izy filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Lalao afrikana any Maraoka Aotra ny vokatra medaly ho an’ny delegasiona Malagasy
Kitra – « Kick Off Futsal «
Baolina lavalava :: Nanome tombony ho an’ny FTM ny fananany mpitsabo